भा’इरल Sachin Pariyar र Radhika Hamal को पहिलो भेटमै क’डा दोहोरी ! संचिनले जिस्काउदा राधिका मु’र्छा | Public 24Khabar
Home News भा’इरल Sachin Pariyar र Radhika Hamal को पहिलो भेटमै क’डा दोहोरी !...
भा’इरल Sachin Pariyar र Radhika Hamal को पहिलो भेटमै क’डा दोहोरी ! संचिनले जिस्काउदा राधिका मु’र्छा
भाइरल Sachin Pariyar र Radhika Hamal को पहिलो भेटमै क’डा दोहोरी ! संचिनले जिस्काउदा राधिका मु’र्छा
राणाशासकका लागि किन सह्य हुन्थ्यो गंगाललालको यस्तो प्रवृत्ति ? अन्ततः एक दिन उनी पक्राउ परे। भनिन्छ, गंगाललालको जोसले चरम यातनायुक्त बन्दी जीवनमा पनि कहिल्यै हरेश खाएन; त्यहाँ पनि उनी यही कविता गुनगुनाइरहन्थे। मनमा रहेपछि कसको के लाग्छ र ? जतिसुकै कठोर बन्धन होस्; मनको आवेगलाई छेक्न नसक्ने रहेछ ! यही विषयलाई लिएर प्राध्यापक श्रेष्ठले ०५६ सालतिर मसँग भनेका थिए, ‘दाजु गंगालालको सहादतसँग सिद्धिचरणको यो कविताको प्रसँग जोडेर मैले एउटा उपन्यास लेखेको छु।’
उनले मलाई उपन्यासको शीर्षकसमेत बताएका थिए, ‘हत्यारा सिद्धिचरण’। छाप्ने सिलसिलामै थिए, दुर्भाग्यवश केही समयपश्चात् उनको निधन भयो। र, त्यो उपन्यासको पाण्डुलिपि त्यत्तिकै हरायो। मलाई लाग्छ, गंगालाल र त्यो कविताको भित्री सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझ्ने एक्लो जीवित व्यक्ति उनै थिए। सम्भवतः उपन्यासमा त्यसको गहिरो व्याख्या थियो।
हुन पनि देवीलालले भनेकै थिए, ‘मैले यो उपन्यासमा एकदमै सत्य लेखेको छु।’ उनी निश्चिन्त थिए, कदाचित् गंगालालले त्यो कविता नपढेका भए उनी सहिद हुँदैनथे।
प्रश्न उठ्छ– के त्यसो भए सिद्धिचरण अपराधी थिए ? त्यो कविता लेखेर सिद्धिचरण पछि पछुताएका थिए ? गंगालाल जेलमा पर्नु र झन् सहिद नै बनाइनुले सिद्धिचरणलाई आत्मग्लानिबोध भएको थियो ? सायद यी प्रश्नहरूको सहज उत्तर त्यो उपन्यासमा थियो। तर देवीललालको निधनसँगै त्यो अध्याय समाप्त भइसकेको छ।
त्यसो त, सिद्धिचरणले यो कविता यत्तिकै लेखेका थिएनन्। यसको रचनागर्भ चाखलाग्दो छ। एक दिन सिद्धिचरणले दशरथचन्दलाई आफूले रचना प्रकृतिवादी गरेका कविता सुनाइरहेका थिए। सबै कविता श्रवण गरिसकेपछि दशरथचन्दले प्रतिक्रिया व्यक्त गरे, ‘कविजी, देशको अवस्था यस्तो छ। तपाईं भने यस्तो फरफर र सरसर के कविता लेख्नुहुन्छ ? युवाहरूलाई राणाशासनविरुद्ध जुर्मुराउने खालको कविता लेख्नोस् न ! अनि पो लेखेको सार्थकता रहन्छ।’
यही प्रतिक्रियाको फल थियो– चम्क युवक चम्क न चम्क। र, सिद्धिचरणको यो कविताले रङ देखायो। उक्त कविताले आफ्ना पिताजीको आज्ञापालन गरिबस्ने गंगालालको अठोटलाई धैर्यपूर्वक रहन दिएन। घरपरिवारप्रतिको मायामोहलाई उनले तिलाञ्जली दिए र पूर्व १ नम्बर चौतारामा मालका हाकिम भई बसेका आफ्ना बाबुलाई एउटा यस्तो व्यहोराको चिठी लेखे–
‘तपाईं मेरो पिता हुनुहुन्छ।… म जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यमा तपाईंको आज्ञाले पछि हट्न सक्दिनँ,… चुपचाप राष्ट्रको पाप बोक्न सक्दिनँ। अब मेरो माया मारिदिनोस्। मेरा अरू भाइ छँदै छन्। देशभक्त पुत्र गंगालालको निवेदन छ– एउटा छोरालाई नेपालआमाको निम्ति बलिदान दिनुहोला। अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्दै म देशलाई छातीको ढाल थापेर बचाउँछु।’
Previous articleश्री स्वस्थानी ब्रत कथा अध्याय – १…श्री स्वस्थानी ब्रत नेपाली महिलाहरूले गर्ने क’ठीन ब्रतको पर्व (ॐ लेखेर सेयर गराै)
Next articleएकाबिहानै चीनको यस्तो सन्देशले ओली प्रचण्डको हो’स् उ’ड्यो, के छ सन्देशमा ? के चाहन्छ चीन ?